P&O Ports oo la Wareegtay Dekedda Bossaso – Radio Daljir
Abriil 6, 2017 5:37 g 0
War Saxaafadeed maanta ka soo baxay Madaxtooyada Puntland (hoos arag) ayna wadajir u soo saareen Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Cali Gaas, iyo Guddoomiyaha Dekedaha iyo Shirkadda Suuqa-furan (PCFC), Sultaan Axmed bin Sulayem, ayaa lagu muujiyey in la saxiixay heshiis kambaniga P&O Ports (http://www.poports.com/) uu maalgashi dhan $336,000,000 galin doono Dekedda Bossaso. Maalgashigaas wuxuu P&O Ports u sharciyaynayaa in ay Dekedda Bossaso maamulaan muddo dhan 30 sano. Maalgashigu waa laba qaybood oo qaybta koowaad dhantahay $136 million oo lagu ballaarinayo Dekedda Bossaso, ahna 450m markab-xire (quay), 5 hektar oo loo isticmaalo hawlaha dekedda, iyo dekedda oo ciidda laga saaro lana qodo illaa iyo 12m. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu muujiyey in maamulka dekedda la casriyayn doono, dhanka computerada (IT) iyo tarminaalada, dhanka wiishashka rarka iyo dajinta iyo dhammaan qalab kasta oo lagamamaarmaan u ah hawlaha raridda iyo dajinta konteenarada.
Madaxweynaha Puntland ayaa war saxaafadeedka ku sheegay in heshiiskan uu yahay mid muhiimad weyn u leh Puntland, uuna qayb ka yahay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Waa horumar maamulkaygu soo hoyiyey ayuu yiri Madaxweyne Gaas, waana mid kor u qaadi doona xiriirka taariikhiga ah iyo midka ganacsi ee ka dhexeeya Puntland iyo Imaaraadka Carabta.
Sidoo kale Guddoomiyaha shirkadda PCFC, Sultaan Axmed bin Sulaymen, ayaa dhankiisa yiri “Dekedda Bossaso waa fursad muhiim ah, waana mid suurtagalinaysa in dekaddu ka gudubto marxaladda hadda ayna u gudubto mid dhanka konteenarada, maadaama dhaqaalaha dalku uu si xawli ah u kobcayo, nabad waartana lagu naaloonayo. Waa qorshaha P&O Ports in ay maalgashato dekedaha noocaan oo kale ah ee suuqyada soo koraya, si dadka dalka leh loo shaqaalaysiiyo, xirfadoodana kor loogu qaado. Sidoo kale dawladda Puntland tani waxay u tahay fursad aan la heli karin oo ay kaga faa’iidaystaan shirkad caalami ah oo adduunka laga yaqaan, una heelan kor-u-qaadidda dhaqaalaha iyo ganacsiga Puntland.”
Hoos riix oo ka bogo War Saxaafadeedka oo ku qoran af Qalaad:
Maqaalo Kale 421 Siyaasadda & Dhaqaalaha 501 Wararka 26118